Dagaalka Putin uu ku hayo haweenka iyo caruurta Ukraine
Wax yar ka dib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu bilaabay dagaalka aan cudur daarka lahayn ee ka dhanka ah Ukraine, waxaa caddaatay in ciidamada Ruushka ay si gaar ah u beeg-sanayaan dadka rayidka ah, gaar ahaan haweenka iyo carruurta.
"Marka ragga sida Madaxweyne Putin ay bilaabaan dagaallo, haweenka iyo carruurtu waa barakacaan. Dumar iyo caruur ayaa dhaawacma. Haweenka iyo carruurta waa la kufsadaa oo la faraxumeeyaa. Dumar iyo carruurna way dhintaan,” ayay tiri danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay, Linda Thomas-Greenfield.
Danjire Linda ayaa intaasi raacisay: "Tan iyo markii uu bilowday dagaalka aan tooska ahayn ee Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine, Ruushku wuxuu duqeeyey xarumaha agoonta iyo isbitaallada hooyada iyo dhallaanka. Waxaan aragnay xabaalo wadareedyo ay ku jiraan caruur dhintay oo is dulsaaran.
Dagaalkan, inaad dumar iyo carruur ahaato ahaa ah khatar kale oo dheeraad ah. Bartamihii Abriil, qiyaastii rubuc ka mid ah dadka Ukraine, ku dhawaad 12 milyan oo qof, ayaa ka qaxay guryahoodii. 4.6 milyan ka mid ah ayaa dalka ka baxay halka 7.1 milyan ay ku barakaceen gudaha Ukraine.
Boqolkiiba 90 dadkaasi waxay ahaayeen haween iyo carruur.
Kala go’da ku dhacay shacabka iyo qalalaasaha dhacay inta lagu guda jiray dagaalka ay si xoog leh u siyaadiyay khatarta ka ganacsiga dumarka iyo carruurta, iyo sidoo kale dhacdooyinka ku saleysan rabshadaha kala duwanaashaha jinsiga, tacaddiyada ka dhanka ah dumarka iyo gabdhaha.
Sidoo kale, markii ay ciidamada Ukraine dib u riixeen oo ay ka saareen ciidamada Ruushka magaalooyinkii iyo tuulooyinkii ay qabsadeen, waxaa soo baxaya akhbaar naxdin leh oo ka soo baxaysa kuwii ka badbaaday gaar ahaan dumarkii la afduubay, ee dhibaateeyay, la kufsaday, la dilay, mid mid ama si wada jir ah.
“Maalin Jimco ah, [April 8] xarun laga raaco tareenka oo loo adeegsanayay in laga daad-gureeyo haween iyo carruur, ayaa la duqeeyay waxaa ku dhacay gantaal ay soo tuureen Ruushka. Wariyaasha ayaa arkay ugu yaraan 20 qof oo dhimatay oo ay ku jireen carruur,” ayay tiri Ambassador Thomas-Greenfield.
“Sida ay sheegeen wariyaasha, gobol weyn oo ka fuqay gantaalka halkaasi ku dhacay ayaa waxaa ku qornaa erayo naxdin leh oo Ruush ah kuwaas oo dhignaa sidan: ‘Waxaa leh carruurta.’ Taasi ayaa ah waxa uu u egyahay dagaalka Ruushka,” ayay tiri danjire Linda. “Waxa ku dhacayo dumarka iyo carruurta ee Ukraine ayaa ah arrin qarracan leh oo ka fog garashada.”
“Tani waa qalalaaso hadda socda taasii maalinbo maalinta ka danbeeysa kasii dareysa,” ayay tiri danjire Thomas-Greenfield. “Ficilladaan gurracan ayaa na xasuusinaya in aan taageerno dadaallada marka hore looga hortagyo inaysan dhicin billoowgiiba. Tani ayaa macnaheedu yahay in la xaqiijiyo codadka iyo xuquuqda haweenka kuwaasoo ah in mar walba la xusheemyo. Waxaa kale oo ay la micno tahay xaqiijinta tacaddiyada iyaga iyo carruurta loo geysto in loo helo la xisaabtan.”